विश्व मुख स्वास्थ्य दिवसमा बिविध कार्यक्रम - Samatal Online
विश्व मुख स्वास्थ्य दिवसमा बिविध कार्यक्रम
६ चैत्र २०७८, आईतवार ६ चैत्र २०७८, आईतवार Santa Kumar Shrestha0Comments
बुटवल।नेपाल डेन्टल एसोसिएसन रुपन्देही शाखाले विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । ‘आ–आफ्नो मुखप्रति गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ आइतबार यो दिवस मनाइएको हो ।
दिवसका अवसरमा दाँतको सफाइ तथा मुख स्वास्थ्यको विषयमा जनचेतनामूलक र्याली, आश्रममा खाद्यन्न सहयोग, निःशुल्क दन्त परिक्षण र रक्तदान लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको नेपाल डेन्टल एसोसिएसन रुपन्देहीका उपाध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै दिवसका अवसरमा बुटवल–११ देविनगर स्थित नेपाल अपांग आश्रममा खाद्यन्न सहयोग गरेको छ । भने, आश्रममा आश्रित रहेका नागरिकहरुको निःशुल्क दन्त परिक्षण गरिएको थियो । उक्त आश्रममा आश्रित रहेका नागरिकहरु बिरामी हुँदा रुपन्देही शाखाले सम्बन्धीत रोगका बिशेषज्ञहरुबाट निःशुल्क उपचार गर्दै आएको उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले बताए । त्यसैगरि दिवसका अवसरमा रक्त सञ्चार केन्द्र बुटवलमा रक्तदान कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसन रुपन्देहीका अध्यक्ष डा. बिकास कुमार अग्रहरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । हरेक व्यक्तीले दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बिहान र बेलुका नियमित दाँत माझ्दा मुख तथा दाँत सम्बन्धी धेरै रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सकिने डा. अग्रहरीको भनाई थियो । अधिकांश नेपालीहरूलाई बिहान बेलुका खाना खाएपछि दाँत माझ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र दाँत माझ्ने तरिका थाहा नभएको उनले बताए । बालबालिकाहरुलाई पनि मुख स्वास्थ्यबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा डा. अग्रहरीले जोड दिए ।
‘शरीरका सम्पूर्ण अंगहरुलाई स्वस्थ र सुचारु राख्नका लागि पनि खानेकुरा र पौष्टिक तत्वहरु मुखबाटै खाने गरिन्छ । तर मुख नै स्वस्थ राख्न सकिएन भने शरीर पनि स्वस्थ रहन सक्दैन ।’ सहसचिव डा. सुनिल खरेलले भने ।